Amsterdam Coin စျေး - အွန်လိုင်း AMS ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Amsterdam Coin (AMS)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Amsterdam Coin (AMS) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Amsterdam Coin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $31 119.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Amsterdam Coin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Amsterdam Coin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
Amsterdam CoinAMS သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0147Amsterdam CoinAMS သို့ ယူရိုEUR€0.0125Amsterdam CoinAMS သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0113Amsterdam CoinAMS သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0134Amsterdam CoinAMS သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.133Amsterdam CoinAMS သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.0928Amsterdam CoinAMS သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.328Amsterdam CoinAMS သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.055Amsterdam CoinAMS သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0197Amsterdam CoinAMS သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0205Amsterdam CoinAMS သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.329Amsterdam CoinAMS သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.114Amsterdam CoinAMS သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.0798Amsterdam CoinAMS သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹1.1Amsterdam CoinAMS သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.2.48Amsterdam CoinAMS သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0202Amsterdam CoinAMS သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.0222Amsterdam CoinAMS သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.458Amsterdam CoinAMS သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.102Amsterdam CoinAMS သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥1.56Amsterdam CoinAMS သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩17.46Amsterdam CoinAMS သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦5.68Amsterdam CoinAMS သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽1.08Amsterdam CoinAMS သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.407
Amsterdam CoinAMS သို့ BitcoinBTC0.000001 Amsterdam CoinAMS သို့ EthereumETH0.00004 Amsterdam CoinAMS သို့ LitecoinLTC0.000253 Amsterdam CoinAMS သို့ DigitalCashDASH0.000149 Amsterdam CoinAMS သို့ MoneroXMR0.000155 Amsterdam CoinAMS သို့ NxtNXT1.04 Amsterdam CoinAMS သို့ Ethereum ClassicETC0.0021 Amsterdam CoinAMS သို့ DogecoinDOGE4.17 Amsterdam CoinAMS သို့ ZCashZEC0.000151 Amsterdam CoinAMS သို့ BitsharesBTS0.561 Amsterdam CoinAMS သို့ DigiByteDGB0.51 Amsterdam CoinAMS သို့ RippleXRP0.0498 Amsterdam CoinAMS သို့ BitcoinDarkBTCD0.000498 Amsterdam CoinAMS သို့ PeerCoinPPC0.0482 Amsterdam CoinAMS သို့ CraigsCoinCRAIG6.58 Amsterdam CoinAMS သို့ BitstakeXBS0.616 Amsterdam CoinAMS သို့ PayCoinXPY0.252 Amsterdam CoinAMS သို့ ProsperCoinPRC1.81 Amsterdam CoinAMS သို့ YbCoinYBC0.000008 Amsterdam CoinAMS သို့ DarkKushDANK4.63 Amsterdam CoinAMS သို့ GiveCoinGIVE31.25 Amsterdam CoinAMS သို့ KoboCoinKOBO3.28 Amsterdam CoinAMS သို့ DarkTokenDT0.0135 Amsterdam CoinAMS သို့ CETUS CoinCETI41.66
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Sat, 08 Aug 2020 22:40:02 +0000.